အတော်ဆုံးလူတို့၏ အောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက် (Secret of Success)
စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ
အနာဂတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးဖို့ လိုတယ်
စာပေဗိမာန် နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် သုတပဒေသာ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် အထူးထုတ်
ကျော်ဦး , ကျော်ဝင်း , ဖိုးသောကြာ (ခေတ်မိုး) , ရဲထွဋ် , ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) , ကိုကိုလှိုင် , ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် , တင်ညွန့် , မောင်မိုးယံ , ကိုဇော်ဌေး (ယဉ်ကျေးမှု) , အောင်စိုးဦး , အောင်ထူး , ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်း (Lian H. Sakhong) , မျိုးအောင် (ရုက္ခဗေဒ) , အောင်နိုင်ဦး , ကျော်ဝင်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) , နန်းညွန့်ယဉ်ခမ်း , တင်တင်ဝင်း (စာပေဗိမာန်) , ဆလိုင်းဗန်ကျုံးလျန် (ယူကေ) , ဦးဟန်ညွန့် (ဥပဒေ) , ယဉ်မင်းထွေး (စာပေဗိမာန်) , ဦးစိုင်းကျော်သူ , ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး , K.M.A , ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မာထွန်း , အေးဖြူ , ထွန်းသက်ထွန်း , သန့်လွင်ထွန်း , ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးအေးမြင့် , သန်းစော (စီ ပီ အေ)
အနာဂတ်၏ ခေါင်းဆောင်မှုပညာ (The Future of Leadership)
စီမံခန့်ခွဲမှု သိပ္ပံခရီးစဉ်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ
Category: ပညာရေး , စီမံခန့်ခွဲမှု
လုပ်ငန်းတစ်ခု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ
ကျွန်တော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ အတွေးအမြင်များ (ရတနာပုံသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု)
သင် မြတ်နိုးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါ၊ သင် လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပါ (Do the job you love. Love the job you do.)
မြန်မာ့စီးပွားထူးချွန်သူများ (အတွဲ ၂)
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ တွေးစရာ မေးစရာ (Leadership Question)
ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) , ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်
ကောင်းမွန်သော အများပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ခြင်း (Promoting Good Corporate Governance)
လူ့တန်ဖိုးအခြေခံသော ခေါင်းဆောင်မှု (Values-Based Leadership (VBL) )
မြန်မာ့စီးပွားထူးချွန်သူများ (အတွဲ ၁)
ကျွန်တော်နဲ့ .... (ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု) (အတွဲ ၂)
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တတိယလှိုင်း (နိုင်ငံတော်သမ္မတ စီးပွားရေးအကြံပေး ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နှင့် ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ဆွေးနွေးခြင်း)
ကျွန်တော်နဲ့ .... (ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု) (အတွဲ ၁)
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ (Management Consultancy Q & A) (အတွဲ ၂)
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ (Management Consultancy Q & A) (အတွဲ ၁)
All of ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် (Myanmar Books) 27 60.15
All of ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် (Others)37.75